Ku saabsan CHPW - Caymiska Caafimaadka Maxalliga ah ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Ku saabsan CHPW
Waxaan dhageysaneynaa khabiirka: adiga.
Waxaan nahay Washington-tii ugu horreysay ee aan-macaash doon ahayn si aan ugu adeegno xubnaha Apple Health.
La kulan Kooxdayada Hoggaanka Fulinta
Isku xirka baahiyaha daryeelka caafimaad ee qoyskaaga waxay dareemi kartaa shaqo waqti-buuxa ah. Laakiin waxaan ku jirnaa kooxdaada, oo kaa caawinaysa inaad gasho dhammaan adeegyada, daaweynta iyo xalka aad ugu baahan tahay caafimaadkaaga oo dhan. Luqad kastoo aad ku hadasho, waxaan bixinaa adeegyo turjumaad.
Waxaan bixinaa marin adeeg caafimaad oo tayo sare leh qof walba, iyadoon loo eegin awoodda wax lagu bixiyo.
Wadajir ahaan, oo leh qoyska Xarumaha Caafimaadka Bulshada, waxaan ku xoojineynaa xubnaha adeegyada taas ka gudub daryeelka caafimaad ee soo jireenka ah (sida cuntada, guryaha, iyo gargaarka gaadiidka).
Waxaan ku xirnahay Washington oo dhan. Shabakadda Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW) waxaa ka mid ah:
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Awoodda Bulshada